Viraltag: डिस्कवर, संगठित, सटीक, साझा र ट्र्याक छवि अनलाइन | Martech Zone
प्रभावी रूपमा अनलाइन इमेजरी प्रयोग गर्नाले तपाईंको ई-वाणिज्य बिक्री, तपाईंको प्रकाशन पहुँच, वा तपाईंको व्यापार बढ्नेछ। यदि तपाईंको कम्पनी फोटोग्राफी, खाना, फेसन वा घटना प्रमोशनको दृश्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ भने, तपाईं पहिले नै दृश्य सामग्री अनलाइन साझेदारी गर्न काम गरिरहनुभएको छ।
दृश्यहरु इन्टरनेट हावी छन् - तपाइँको फेसबुक फिडबाट Pinterest मा। दृश्यहरू ड्राइभ क्लिकहरू, साझेदारी, समझ र रूपान्तरण को लागी प्रमाणित गरीएको छ। धेरै व्यवसायहरूको लागि समस्या भनेको छवि स्रोतहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने भन्ने हो - खोजी, संगठन, सेयरि and र ट्र्याकिंगबाट।
प्रविष्ट गर्नुहोस् Viraltag१०,००० भन्दा बढी कम्पनीहरू द्वारा प्रयोग गरिएको। Viraltag संग एकीकृत क्यानभा, ड्रपबक्स, पिकासा, इन्स्टाग्राम, आरएसएस फिडहरू र अधिक - ताकि तपाईं एकै प्लेटफर्ममा तपाईंको सबै दृश्य सामग्री फेला पार्न र व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ।
Viraltag तपाइँलाई तपाइँको सामाजिक खाताहरू एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ, सहित पिन्टरेस्ट, फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, लिंक्डइन, र अब इन्स्टाग्राम! ती तस्बिर सम्पादन, सामग्री खोज, ह्यासट्याग अनुगमनको साथ तालिकाको साथ प्रस्ताव गर्नका लागि मात्र प्लेटफर्म हुन्। तिनीहरूसँग एक पनि छ Chrome एक्सटेन्सन!
Viraltag को लागी साइन अप गर्नुहोस्
टैग: Canvaसामग्री खोजड्रपबक्सफेसबुकफीडह्यशट्यागह्याशट्याग निगरानीछवि खोजीछवि सम्पादनछवि तालिकाछवि खोजीछवि साझेदारीइन्स्टाग्रामLinkedInपिकासाPinterestआरएसएसआरएसएस फीडसामाजिक मिडिया तालिकाtumblrtwitterभाइरलटागभविष्यवाणी मार्केटिंग के हो